Maxay ahayd nooca ugu fiican ee AutoCAD? - Gofumed
Luulyo, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Featured
Had iyo jeer waxaanu aragnay su'aasha halkan, oo ku saabsan nooca uu ku fiican yahay ama sababta aanu u difaacno; markaa marka qof cusub yimaado, waxaa badanaa la yiraahdaa waa uun qurxiyo. Ugu dambeyntii, barta bilawga ah waxaan la tashannay Facebook, halkaas oo Geofumadas uu leeyahay 18,000 raacsan, oo arag waxa ay ahayd in laga jawaabo:
AutoCAD 2012 qiimaha, waxaan fahamsanahay casriga ah, iyo Facebook waa meel bannaan oo jiilasha cusubi ku badan yihiin.
Laakiin waxa soo jiidanaya waxa weeye in meel labaad ay u taagan tahay AutoCAD 2007, inkasta oo ay ahayd sannadkii hore 6.
Kadibna mar labaad booska AutoCAD 2013, waxaan sidoo kale fahansanahay casriga iyo, haddii aan waydiisanno su'aasha laba sano ka dib waxay tiri midkii ugu dambeeyay.
Waxay u muuqataa midka afaraad ee AutoCAD 2010, oo leh dhibic hooseeya laakiin waxay ku jirtaa liis ay ku jiraan codad gaar ah oo ku saabsan dhammaan qaybaha kale.
Maxaa ka dhigaya dadka inay qiimeeyaan AutoCAD 2012, 2007 iyo 2010?
Ujeedada warqad tani waa si ay u falanqeeyaan qoraalkii 10 dambeeyay ee AutoCAD, in ay isku dayaan si ay u sharxaan qaabka loo sii daayo by AutoDesk iyo horumar in uu qaaday dadweynaha gadashada hadda gaadiidka in Internet iyo shabakadaha bulshada ka ciyaaraan door lagama maarmaanka u ah isdhexgalka ee novelties.
Waxaan u adeegsan doonaa falanqaynta miiska soo socda kuwaas oo soo koobaya isbedelada ku dhacay AutoCAD ee sanooyinkii ugu dambeeyay ee 10. amarrada cusub oo soo baxay sannadkii (marka laga reebo 2004 ma khuseeyo tixgelin this), fari heli karaa amarrada version helay isbedelka aan la heli karin, maxaa yeelay guud ahaan amarrada hadda iyo amarradiisa joojiyo (Tani kuma jirto 2013 version ka mid ah laakiin qolkaas oo dhan waa kuwa laga joojiyay sanadaha 10 lagu daray). Sidoo kale dib u eegay versions aasaasiga ah oo kaliya, maahan mid taagan (ie. 3D Civil AutoCAD, AutoDesk Maya, iwm)
1 Heerka qaababka cusub dwg
AutoDesk waxay ku haysay qaabka dwg ee nooc kasta laga bilaabo 1.0 ee 1980 ilaa sanadka 1998 iyadoo leh AutoCAD R14. Ka dib markii uu AutoCAD 2000 ka dib, wareeg ah qiyaastii saddex sano ah ayaa la gaarey, ficil ah in dad badani su'aalo aan loo baahnayn.
Waxaa jira waxyaabo badan ka hor version 2004 si kastaba ha ahaatee in guul this oran waa format billabo mar dambe lala wadaago Open Design Isbahaysiga (ODA) sidii ay ahaan jirtay ilaa format 2000.
Hadda dabadeed waxaan aragnaa in marka waxaa jiray qoraalkii reformatting, waxay u yimaadeen inay sii badnayeen maxaa yeelay, waxay ka wakiil ah u maleeyeen si fiican loo isticmaalo khayraadka laakiin sidoo kale sababta oo ah waxa lagu qasbay user ah in laga takhaluso of version hore in weli ay taageerayaan qaab cusub. Waxaa xaqiiqo ah oo cajiib ah in sano markii undid amarka AutoCAD ahaayeen hufan sanadka 2006 36 markii amarradiisa iyo sanadkii 2010 17 amarrada kale tegey; Inta ka hartay sanadka oo idil waxaa laga reebay amarrada 1 iyo 3.
Sidaa awgeed gabagabada koowaad:
inta badan Dhacdooyin AutoCAD waxaa lagu calaamadeeyay by sannadood, oo aan format billabo ku lahaa isbedel: AutoCAD 2000, 2004 AutoCAD, AutoCAD 2007, 2010 AutoCAD.
Laga soo bilaabo taas waxaan sidoo kale ku soo gabagabeynay in version 2013 uu leeyahay qaab isku mid ah sababta oo ah qaabka dwg isbeddelay. Inkasta oo aynaan u malaynaynin suurtagal maaha, sababtoo ah nawaaxiga aan caan ahayn AutoCAD 2012 iyo qadar yar oo ah Nafaqada AutoCAD 2013.
Inkasta oo, caddayn in qaabka isbeddelka aan loo baahnayn la xiriirta nooc ka mid ah mid ka wanaagsan kii hore. Hase yeeshee, waxay door ka ciyaareysaa in aan la adeegsan karin goobaha kale ee isbeddelkaan aan loo baahnayn waqti go'an oo aan loo baahnayn.
2 Qadarka hagaajinta
Si aan u falanqayno waxaan rabaa inaan isticmaalo garaafka hoos ku qoran. Fiiri in lineka huruudku uu ka dhigan yahay horumarinta amarrada jira, halka xariiqda buluugga ah ay matalaan amarrada cusub. 2007 version wuxuu u taagan yahay sanadka markii amarro badan la hagaajiyay (116), oo lagu daray wax ka yar Xeerarkii cusub ee 89. Isbeddeladani waxay lahaayeen waxyaabo badan oo la sameeyo wajiga cusub ee 3D muuqaalka, hagaajinta maareynta maaraynta, samaynta iyo soo dejinta murtida. Naqshadda 3D waxay joojisaa inay ka timaado walxaha hore iyo fikradaha 3D ayaa la geliyaa.
Sawirkan soo socda ayaa laga soo qaatay Wadada baabuurta ee AutoCADWaxa ay ka tarjumaysaa sida AutoCAD 2007 waa version ugu hadhid (line buluug madow), ilaa xad in dhamaadka (in July 2012) waxaa la tashaday sida ugu badan ee AutoCAD 2011 (line casaan), iyo dabcan outperforms versions 2009 (online cagaaran) iyo 2008 ma ku cad shaxda. Waa la fahmi karo sababta ay dadku xusuusan version 2007 sida mid ka mid ah kuwa ugu fiican, sababtoo ah saamaynta amarka fiicnaaday waa dadka isticmaala jira kuwaas oo go'aansaday inuu sii joogo version in inkastoo ay isbedel ee sannadaha soo socda.
Kuwani waxay dareensan yihiin in AutoCAD 2008 ay qeexday isbeddel yar, iyo in 2009 kaliya uu lahaa interface cusub oo ka dhiga inay iska caabbiyaan.
Waa laga gudbi doonaa ilaa xajka 2010 uu la yimid amarrada xNUMX iyo isticmaalka weyn interface cusub. Waxa kale oo ay la jaanqaadaysaa 2007 version, oo ah marka uu billaabayo wanaajin taxane ah oo ku saabsan mabaadi'da saddexda cabbir ah iyo taageerada Windows 7 ee 32 iyo 64.
AutoCAD 2007: Horumarinta amarrada hadda jira waxay sii wadaan kalsoonida dadka isticmaala si ay u helaan version AutoCAD. Laakiin sidoo kale waxay keenaysaa iska caabin si loo bedelo qaababka dambe.
Waxaa sidoo kale la arki karaa in AutoCAD 2010 ay dhaafsiisan tahay AutoCAD 2012 inkastoo marxaladda dambe, laakiin mugga su'aalku wuu ka sarreeyaa sanadihii la soo dhaafay. Inkastoo AutoCAD 2007 waa waayo-aragnimo aad u qanacsan oo loogu talagalay dadka isticmaala, AutoDesk waxay samayn lahayd ka soo horjeeda tarjumaadaha cusub maadaama aysan iibinaynin iibka. Taasi waa sababta aan u aragno in xoojinta soo socota, AutoCAD 2010 ku celiso, laakiin ka fogow 2012 oo leh warar badan oo ka wanaagsan horumarka.
3 Tirada casriyeynta
Cusboonaysiinta waa muhiim, waa mawduuc si weyn u xoojiyay version 2007 halkaas oo 89 leedahay amarro cusub iyo 2012 halkaas oo ay timaado 139.
Inkasta oo ay tahay arrin qariib ah saameynta uu leeyahay dadka isticmaala ee ku saabsan hagaajinta amarrada jira. Eegista sawirka hore, waxaa loo arkaa in caan ka mid ah version of AutoCAD ay gaarto ugu sarreysa bilaha ugu horeeya ee sanadka ka dib markii la bilaabayo, kaliya marka ay version cusub u muuqato. AutoCAD waxay sameesaa bilaha Abriil, isla markaana waxay ka bilaabataa meesha ay ka soo baxdo maxaa yeelay waxaa jira wax cusub oo cusub. Xilliga dayrta wuxuu ku xiran yahay in ay ku guulaysatay in qofku ku guuleysto isticmaalaha hore, ee aan ku jirin kuwa cusub.
Laakiin eeg sida AutoCAD 2010 ugu guulaysatay dhibcaha ugu sareeya ee dhammaan noocyada ay leeyihiin, 2012 ayaa si xushmad ah u gaartay 80% tan ka hor intaanay bilaabin soo-deyntooda. Waa in aan fahamnaa in version-ka 2012 uu leeyahay saameyn ka weyn tan hore, sababtoo ah heerka hal-abuurka, laakiin tani ma aha kiiska. Sababta ayaa ah in version 2010 uu leeyahay horumarin dheeraad ah ee amarrada jira (93) oo ka dhan ah 46 ee version 2012 inkastoo ay jiraan wax cusub oo cusub. 2010 version ayaa wali isticmaalaya isticmaalka badan marka la eego 2011 waxaana laga yaabaa in ay ka badbaado wax ka badan 2012 saddexda sano ee soo socota. Dhanka kale, AutoCAD 2013 waxay noqon doontaa hal talaabo, sababtoo ah hagaajinteeda iyo horumarkooda waa mid aad u yar inkastoo ay isbeddelka qaabka dwg, sida version 2011 inkastoo ay dib u soo celisay Mac version.
Jacaylka ugu horeysay waxaa sida caadiga ah oo kaliya la siiyo mar nolosha qalab, oo dhan ayaa la yaabay oo la version hore waxaannu aragnay, oo ay sii wadaan in ay aaminsan yihiin in tani ay ahayd version ugu fiican "xataa haddii in yar gabadha jir" ​​iyo xitaa ka dib markii aan u dhaqaaqay waxa weli aan u bogi this version cusub. version in sida caadiga ah waa in na saamaynta ay news. Tani waxay la ogaadaa karaa dadka isticmaala ka dib markii versions badan lagu ogaaday in R14 ahaa mid cajiib ah, sidaasoo kale wuxuu ahaa 2000 in la yaabay iyadoo la isticmaalayo gelinno 32, oo wuxuu arkay horumar weyn oo dhowr version 2007 in aan dareemay ma u baahan tahay wax badan oo dheeraad ah . guul cusub ayaa sababay 2012, inkastoo caddeeyo, jacaylkaagii hore la jiilka ka yar.
Laakiin faa'iidada ay tahay in hal-abuurka cusubi uu ku jiro maskaxda dadka cusub. Ardayda jaamacadda, inkastoo macalinkooda wax ku baro AutoCAD 2010, waxaa loo dejin doonaa inay isticmaalaan ugu dambeyntii; waa waxa ku dhacay AutoCAD 2012 jiilka cusub. Noocani wuxuu ku jiraa maskaxda isticmaalayaasha cusub, sahaminta aan ku sameynay Facebook wuxuu caddaynayaa. Laakiin xidhitaanka qaybtan, tani waa gabagabeynteena:
AutoCAD 2012: Qadarka ugu weyn ee soo cusboonaanta waxay keeneysaa caan ka weynaanta version oo leh jiilasha cusub. Ma aha qasab maahan in mudnaansho waqti dheer ah.
4 Isku soo uruurinta hagaajinta
Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay arrin adag oo kakan oo la maareynayo, laakiin waan tixgelineynaa tan iyo markii ay soo ifbaxday waxa kobciya aragtida iyo waxyaallaha kala duwan ee sida wax u dhacaan barnaamijyada kale sida kiiska Microstation.
Waqtiga ay dhaaftay, AutoCAD waxay ilaalisay amarrada aan la isticmaalin ama laysaga tagin. Waxoogaa yar ayaa la tuuray, hagaajiyay ama amarro cusub ayaa lagu daray:
Ilaa heerkii 2006 waxaa jiray adeegyo 674 ah.
Ka hor intaan la joojin 97 iyo 2013 ayaa 68 la joojiyay.
At 2013 waxaa jira wadarta 1047 isticmaalka oo kaliya 86 oo aan laga helin kuwii ka jiray sanadahaas 10.
2006 iyo 2010 waxay sare u qaadeen markii ay jirtay talaabo aan loo baahnayn, 53 guud ahaan.
Nadiifintaan waa mid aan la dareemin laakiin waxay u taagan tahay shaqo gudaha ah si ay u soo kabato amarrada kuwaas oo ay isticmaalaan wax yar. Inkasta oo amar ka badani uu tilmaamayo shaqooyin badan, marka la eego qadar yar oo wadartaas loo isticmaalo. AutoCAD u yimaadeen inay nolol resolvernos waxa aannu ku samaynaya la habeeno badan sii hurdo la'aan on board sawir on in uusan waxba iska badalin badan sanadihii la soo dhaafay, laakiin in ka qabashada daydo 3D halkaas oo in kastoo horumar gaabis ah ayaa marka la barbar dhigo verticals kale AutoDesk, ayaa si fiican ugu habboon dadka isticmaala.
Tirinta tirada amarrada ayaa joojiyay in ay muhiim u yihiin waqti hore, sababtoo ah hadda amarrada loo isticmaalo waa kuwa lagu arko badhamada. Laakiin sanadihii hore, haddii aanan garanayn amarka ... ma jirin. Haddii ay ku jirto liiska, waxaan rabnay inaan aragnay waxa ay ahayd.
Noocyada ugu fiican ee AutoCAD
Gabagabada, kuwani waa noocyada ugu fiican ee AutoCAD:
AutoCAD 2007 ayaa aheyd qaabka ay ku guuleysteen waqtigaan, badeecada tirada amarrada oo kordhay wax ka badan munaasabaddeeda.
AutoCAD 2012 waxay ku raacdaa adiga oo ah sheyga ugu weyn ee horumarinta iyo aqbalaada jiilasha cusub.
AutoCAD 2010 ayaa sii daayo wayn maadaama ay ahayd markii qarniyada oo waxay bilaabeen inay aqbalaan iman kara ee Ribbon ah, iyo awoodaha badan lagu soo daro xog Tusaale fiican u parameterised iyo 3D.
AutoCAD 2013 ... ma noqon doonto qayb ka mid ah hooskii 2012. Si aad u sugto mid kale, waxaa lagama maarmaan ah in la sugo dhowr sano.
Adiga, maxaad ahayd nooca ugu fiican?
Post Previous«Previous Buug-yaraha Sawir-la'aanta La Aqriyo
Post Next Abuuri karo qaybaha iskutallaabta CivilCADNext »
9 Jawaab ah "Maxay ahayd nooca ugu fiican ee AutoCAD?"
JHONNY PALACIOS isagu wuxuu leeyahay:
2007 kii ugu fiicnaa
José María Velazquez isagu wuxuu leeyahay:
Inkastoo aan shaqeynayo, waxaan ku shaqeeyay AutoCAD '11 kaasoo ah kan ugu badan ee aan isticmaalo.
Waxaan aqoonsanahay in AutoCAD '08 ay i siiso hawlo fara badan iyadoon wax isbedel ah sameyn.
Dhibaatooyinka keliya ayaa ku jira codsiga Renders, hawsha aan hadda isku dayayo inaan xalliyo.
R14 dhab ahaantii waa sii deyn weyn.
Waxaa laga yaabaa sababtoo ah markii ugu horeysay waxaan heysanay wax aan ku fakarnay inuu ahaa kii ugu wanaagsanaa, Windows
Version R14, waxay socotay dhowr sanadood, waxay sii waday sii deynta waxayna sii wadeen isticmaalka.
Waxaan u maleynayaa in nooca ugu fiican ee autocad uu shaki la’aan yahay tan xNUMX, waxay leedahay horumar badan oo ku saabsan amarada iyo isdhaafsiga, iyo sidoo kale isku xirnaantiisa, hagaajinta Autocad 2007 in ka badan hagaajinta ayaa ah noocyo ay ku jiraan sifooyin badan oo aan loo baahnayn oo taas khalkhal geliya isticmaalaha, Fikradayda, nooca 2010 ayaa ah midka ku habboon dhammaan baahiyaha qaabeynta.
Roberto Morán isagu wuxuu leeyahay:
Midda caddaynaysa in nooca 'Autocad 2012' uu yahay midka ugu fiican ayaa umuuqda inuusan gaarin inuu soo bandhigayo qalad culus, taasna waxaa loola jeedaa Tallaabooyinka (marka la sameynayo cabbirid sinnaanta (x) ka dibna lagu cabiro masaafadaas iyadoo la raacayo amarka Waa mid aad u kala duwan, haddii aadan gaarin waxa naxariis ah, ka dib sida ay ula shaqeeyaan noocaan, waa sababtaas inaan u rakibo 2013 kaas oo saxay qaladkan, laakiin taa beddelkeeda qaabkani wuxuu kicinayaa weydiisiga xusuusta intaa ka sii badan xitaa haddii aan haysto 8 ama 16 Gigas markii feylasha shaqeynaya ay badan yihiin isla daaqadda, waxaan rajeynayaa in nooca soo socda aysan laheyn khaladaad kuwan, taasi waa fikradeyda qunyar-socodka ah.
JUAN EXPOSITO CASTAÑEDA isagu wuxuu leeyahay:
AAD OPINION QOFKA, IN KA BILOW VERSION R14 THE aad u wanaagsan, ALL MA AHA IN WAA BEST EE IMINKA KA SAMEEYAY UP tireedyada, MARKAY IYO QOYSKA aad TAHAY OF AUTOCAD IYO quires KHIBRAD horumarka CONTEXT SHAQADA R2007 waa weyn oo ku haboon, AAD MAR OO ADIGA KULA FAMILIARISAS kharash badan inuu ka tago. Waa sida telefoonka gacanta dukaamaysiga iyo BARO ALL tabaha. MARKAA QUIT AS AAD EE JAJAJAJAJAJAJJA kharash badan. ILAA MARKAA
Sidee ku saabsan on su'aashaada Waxaan qabaa version ugu fiican ee Autocad ilaa iyo haatan waa 2012 ee aan shaki ku jirin, in la yidhaahdo in aan xitaa ma doonayaan in ay ku rakibi version 2013 ama qabteen aan fiiro, Waxaan u malaynayaa in qoraalkii 3 ugu wanaagsan ee uu noqon lahaa: 1. - AutoCad 2012, 2 2007.- AutoCad iyo AutoCad 3 2010.-
Gunaanad: AutoDesk waa in aysan qaadan faraxsan oo ku saabsan bandhigyada sanad walba version ah AutoCad isagoo ka sano oo keliya ma eryo versions ka 2000 ee sano ee 2001 iyo 2003, si ay u wanaagsan yayna AutoCad leeyihiin waa marka in meesha laga saaro oo aan si ay u ilaaliyaan joogta ah ee AutoCad si aad u cusboonaysiiso Cabsida ... litas canelitas sannad kasta. Saludos Amigos ee egeomates.
Aniga ahaan waxay ahayd nuqulka R12 ee Windows 98